Soomaali (Somali) - Tenants Victoria
Macaamiisha Adeegga Victoria (Guri kireystayaasha Victoria) waa adeeg bilaash ah oona lagu dhowro xogta dadka guriyayaasha kireysta. Waxaan luqada kala duwan ku bixinaa adeegyo iyo macluumaad si macaamiisheena ay taageera u helaa.
Shirkadda Tenants Victoria (Tenants Victoria) waxaa:
ayaa kaa caawin kartaa buuxinta foomamka ama heshiisyada la xiriira guri kireysashadaada tenancy
ay kaa caawineysaa dhibaatooyinka qaar, sida hagaajinta burburka guriyaha, kirada la kordhiyay
iney iyadoo wakiil kaa ah gorgotan la sameysa qofka aad guriga ka kireysatay ama shirkadda guriyaha
iney kaa caawisa ama kaa noqoto dacadaha la xiriira guri kireysiga ee VCAT (Victorian Civil and Administrative Tribunal))
kala hadashid bulshadaada arimaha ku saabsan xuquuqda guri kireysashadas
Talo sharciyeed ee kiraystayaasha taleefanka: (03) 9416 2577
Haddii aad ka kiraysato gurigaaga wakiilka guryaha ama milkiile gaar ah
Isniinta ilaa Jimcaha 10.00 am ilaa 12.00 pm
Kireystayaasha guryaha bulshada: 1800 068 860
Haddii aad ka kiraysato gurigaaga dowladda ama hay’ad beeleed aan faa’iido doon ahayn
Isniinta ilaa Jimcaha 9.00 am ilaa 4.00 pm
Haddii aad rabto inaad ku hadasho luqaddaada, fadlan noo sheeg magacaaga, luqaddaada, iyo lambarka taleefankaaga. Mar labaad ayaan kugu soo wici doonaa iyadoo turjubaan ah.
Macluumaadka ku saabsan cudurka coronavirus (COVID-19) arag:
Coronavirus (COVID-19) – Af-soomaali [DHHS websaydh]
Coronavirus (COVID-19) ilaha ku yaal afka Soomaaliga [Websaydhka Caafimaadka bogga]
Macluumaadka Coronavirus ee afkaaga ah [SBS websaydh]
xuquuqda sharciga ah ee kireystayaasha
Hagaajinta Qaboojiyaha Hawada
Ku wareejinta & ka sii kireynta (PDF)
Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah
Codsiga guryaha kirada ah ee gaarka ah (PDF)
lacagta dibaajiga iyo soo celiyo
Tusaha tallaabo tallaabada ah ee sidii aad dib ugu heli lahayd debaajiga (PDF)
Ka bixista heshiiska kirada guriga
Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha (PDF)
Complaints against landlord and real estate agents
Difaacida dalabka Magdhowga (PDF)
Dhameynta kireysiga (PDF)
Ka saarid (PDF)
Siinta mulkiilahaaga Ogeysiiska Jebinta Waajibaadka (PDF)
Alaabka laga tegay
Alaabka laga tegay (PDF)
Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan
Ku heynta ‘saaxiibada’ guryaha dadka wadadegan (PDF)
Xayawaanka la korsado (PDF)
Asturnaanta iyo gelitaanka
Iska ilaalinta guri ka saarida ijaar kugu ururey awgiis (PDF)
Kordhinta ijaarka (PDF)
Dayactir guryo kiro ah
Tusaha dayactirka tallaabo tallaabada ah (PDF)
Guryaha lawada degan yahay (PDF)
Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow”
Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow” (PDF)
xuquuqdaada marka milkiilaha gurigu ay iibinayaan guriga kuu kiraysan
Mulkiiluhu wuu iibinayaa (PDF)
Kharashaadka tasiilaadka la isticmaalo (PDF)
Markaad hesho Ogeysiiska ah Jebinta Waajibaadka (PDF)
Markaad dooneysid inaad guurto (PDF)
Waa maxay fursadaheyga gurigu?
Waa maxay fursadaheyga gurigu? (PDF)
Waa maxay fursada guriga ee igu haboon?
Waa maxay fursada guriga ee igu haboon? (PDF)
Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga?
Sidee baan ku helaa oo aan u dalbadaa guriga? (PDF)
Liiska jeegareynta kormeerka guriga:warqada xaqiiqda ee guriyeynta ardeyga
Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha?
Maxay u taagan yihiin xarfaha la soo gaabiyey ee guryaha? (PDF)
Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago)
Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan soo guurin? (guryaha gaarka ah ee kirada ah iyo guryaha la wadaago) (PDF)
Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah)
Maxaan u baahan nahay ka hor intaanan soo guurin? (guryaha qol qolka ah) (PDF)
Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin?
Maxaan u baahan nahay inaan ogaado ka hor intaanan guurin? (PDF)
Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid)
Buug yaraha xuquuqda Kireystaha (soo koobid) (PDF)
Dayactirka guryaha Dadweynaha
Racfaan ka qaadashada go’aanka guryaha dadweynaha
Kirooyinka guryaha Dadweynaha
Iska ilaalinta kharashaadka Dayactirka
Tusaha tallaabo tallaabada ah ee xuquuqda soo gelitaanka (PDF)